Manomana ny Diabe Eran-tany i Amerika - Ny Diabe Eran-tany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Manomana ny Diabe Eran-tany i Amerika
02 / 09 / 2019 31 / 07 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny kaontinanta amerikana dia manomana ny fandaharana ho an'ny Diabe faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana
Taorian'ny nandaozany an'i Dakar tamin'ny Oktobra 27 avy tao 2019, ny ny diabe Hiampita ny Ranomasimbe Atlantika ary hihazo ny kaontinanta amerikana miditra ao New York amin'ny Oktobra 29.
Taorian'izay dia handeha ho any Amerika afovoany amin'ny alàlan'i San José de Costa Rica ny 23 Novambra; ny Novambra 28 niditra tao Bogotá avy tany Amerika Atsimo.
1 Amerika Avaratra
2 Amerika afovoany
3 Amerika Atsimo
3.4.1 Fandraisana anjara amin'ny 2ª Walk ho an'ny Kolontsaina fandriampahalemana izay hotanterahina ny volana aogositra
3.8.1 Ny 2MM dia efa nambara fa mahaliana ny fampianarana any amin'ny faritany Córdoba
3.8.2 Tetikasa hanambarana ny herinandro 1 ny volana Oktobra ny herinandron'ny tsy fitiavana amin'ny 2019
3.9 Manomana ny Martsa maneran-tany i Amerika
Nankalazaina ny ML King tany Hélène Park.
Ny ekipan'ny Base dia handalo any New York sy San Francisco.
Misy fitsidihana any amin'ny Firenena Mikambana dia atolotry ny sekretera jeneraly.
Eo ihany koa ny fanolorana ny horonantsary "Ny fiandohan'ny fiafaràn'ny fitaovam-piadiana nokleary".
Tamin'ny alàlan'ny vaomiera ara-toekarena ho an'i Amerika Latina sy Karaiba, dia nosokafana ny tsipika iray ho an'ny fiaraha-miasa sy ny fifangaroana ao anatin'ny rafitry ny fandaharam-potoana 2030.
Mifandraisa amin'ny Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana momba ny lohahevitry ny Fanavaozana ny Firenena Mikambana ary ny fifampidinihana amin'ny makro mety momba ilay lohahevitra mandritra ny GM.
Nandray anjara tamin'ny diabe ho an'ny Andron'ny Tany izy niaraka tamin'ny hafatra "tsy fanarahan-dalàna dia ekolojia: raha tsy misy ny ady dia tsy misy fitaovam-piadiana mandoto."
Ny famoahana an-gazety dia nokasaina mba hangataka habaka ahafahana manao ny fanasana hikarakara hetsika handehanana ny diabe.
Ny asabotsy 27 / 4 dia nanatrika ny hetsika Lohataona an'ny Alternatives izahay mba hahita fifandraisana.
Nasain'izy ireo nandray anjara tamin'ny fihaonana an-tampon'ny Fihaonambe Nobel izay hotanterahina any Mérida amin'ny 17 sy 23 ny volana martsa 2019 ny volana martsa maneran-tany.
Mandritra ny fitsidihan'ny ekipan'ny Base dia hisy hetsika amin'ny sisintany miaraka amin'i Etazonia sy ny fanomezam-boninahitra ho an'ny fifanarahana an'i Tlatelolco.
Ny fiaraha-miasa dia natao teo amin'ny olona sy ny fikambanana mba hanamafisana ny vondrona mpanentana, ao anatin'izany ireto dia misy ny sehatra samihafa naseho:
Fikambanana sivily sivily
Ireo fikambanana mifandraika amin'ny serasera ifotony
National University: Mpianatra ao amin'ny oniversite San
Carlos de Guatemala, Tanàna: Kaominin'i Mixco
Fiofanana sekoly 60 izay hitarika ny fananganana ny hōʻailona fandriampahalemana.
Hotanterahin'ny zanaky ny sekoly any amin'ny faritra fetra Honduras sy Guatemala, rehefa nahazo ny 2ª MM.
Ny fikambanan'ireo mpianatra mpitsabo ao amin'ny oniversite nasionaly UNAH sy oniversite roa tsy miankina dia mikarakara ny fiarahan'ny 2ª MM, amin'ny fitsangatsanganana an'i Amerika Afovoany.
Ny monisipaly ao Omoa sy San Pedro Sula, dia nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ny 2ª MM, miaraka amina hetsika marobe.
Natomboka ny fifaninanana mifandray amina fikambanana Kuba sasany.
Hanomboka hetsika avy amin'ny Oniversite Andrés Bello izy ireo.
Angamba tany amin'ny tanàn-dehibe maro ao amin'ny firenena: San Salvador, San Miguel, Chalatenango, sns.
Manolotra ny drafi-pandaminana feno ho an'ny fampielezankevitra tsy misy fizarana ho an'ny ivon'ny fampianarana 11 any 22 amin'ny Jolay.
Ny drafi-panofanana momba ny mpampianatra dia manomboka amin'ny herinandro fahatelo amin'ny Jolay.
Fihaonana miaraka amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta, Munisipaly San José sy ny Organizations hanolorana ny hetsika amin'ny lohahevitra tsy madiodio.
Fihaonana isaky ny dimy ambin'ny folo andro amin'ny alarobia ao amin'ny CAP avy any 5p.m.
Fankalazana miaraka amin'ny hetsika ara-javakanto, tandindon'ny zanak'olombelona amin'ny andro iraisam-pirenena amin'ny fandriampahalemana 21 / 9.
Fankalazana ny andro 2 / 10 ny tsy fifandeferana sy fandaozana ny 2MM.
Fandraisana anjara amin'ny Andron'ny asa, ny fizarana mpandeha ary mitondra ny 2MM Blanket.
Fanambarana momba ny fahalianana ara-kolontsaina 2MM nataon'ny governemantan'i Costa Rica.
Mandritra ny diabe, kasaina, ny 27 sy 28 novambra, fandraisana anjara amin'ny Forum iraisam-pirenena momba ny "The Role of tafika tamin'ny taonjato XXI".
Hetsika miaraka amin'ireo ankizy 1000 eny amin'ny kianjan'ny Museum an'ny Ankizy.
Andininy momba ny fandriampahalemana ao amin'ny zaridainan'ny demokrasia.
Ny fanatanterahana ny zanak'olombelona hatramin'ny fandalovan'ny 2MM sy ny hetsika ara-kolontsaina fandraisana an-tanana.
Tamin'ny herintaona dia nisy forum iray natao tao amin'ny Oniversite Interamerican.
Eo anelanelan'ny faran'ny volana septambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Oktobra of 2019 dia hanao forum isika ao amin'ny oniversite eo an-toerana (toerana, daty ary fotoana hanamafisana).
Ao anatin'ilay rafitry ny II World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy herisetra dia manasa ireo mpandahateny handray anjara amin'ny Forum isika: "Kolontsaina fandriampahalemana, tsy famoretana, fanajana ny zaza sy ny voajanahary ho an'ny Panama tsara kokoa."
Izy ireo dia afaka mizara vaovao izay heveriny fa mahakasika ny hetsika sy ny fandraisana anjara ary ny tetikasa amin'ity lafiny ity.
Ao Bogotá: Miara-miasa amin'ny sekoly 40 izay nanohana anay tamin'ny volana Martsa Amerikanina Tatsimo.
Izahay dia hanao atrikasa momba ny tsy fandriampahalemana mavitrika, halatra, sary, faneva saina, tantara ary asa soratra, tandindon'ny fandriampahalemana eo amin'ny sehatra sy diabe.
Ny fanatanterahana fampisehoana lehibe ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatoniana.
Ao amin'ny Barrancabermeja: Hisy ny fihaonambe ao amin'ny Unipaz sy SENA.
Diabe manerana ny tanàna hamory olona 2000.
Hifandray amin'ny sampandraharaha miaro ny zon'olombelona izay nifarimbona tamin'ny diabe voalohany.
Hifarana amin'ny marika fiadanana lehibe isika ao amin'ny Kianjan Kolibri.
Ao Medellin: Fetin'ny kolontsaina, resahana amin'ny oniversite iray momba ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana.
Any amin'ny tanànan'ny Colombia hafa: (Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Armenia-Neiva).
Ny filaharana amam-pihavanana dia hatao
Lahateny momba ny tsy fanarahan-dalàna eny amin'ny oniversite sy institiota.
Any Guayaquil, nisy taratasy nalefa tany amin'ny oniversite 2 hanaovana forum.
Ny Kolonim-pirenena izay nampita am-bava ny adhesion dia nifandray.
Tany amin'ny tanàna hafa toa an'i Manta, Ámbato ary Quitó, efa nisy ihany koa ny fifandraisana.
Ao Guayaquil : Ireo asa atao dia nomanina ao amin'ny Oniversiten'i Guayaquil sy ny Casa Grande University. Tompondakan'ny klioba fanatanjahantena inter. Kolontsaina vitsivitsy sy Kaominin'i Guayaquil.
Amin'ny bodofotsy: Misy ny hetsika nokasaina handalovana ny 2ª ny volana martsa nifandrimbona tamin'ny Pan American Roundtable sy tao amin'ny Oniversite Manta.
Mihaona isaky ny alahady miaraka amin'ny asa fampandrosoana ny tena manokana sy ny fandaminana ny 2da ny volana martsa.
Diptych dia novolavolaina, andrim-panjakana mifandray.
Nifampidinihana tamin'ny radio izahay.
Ary, tao amin'ny Forum Sao Paulo tamin'ny alàlan'ny Sehatra ho an'ny Vehivavy, dia nipoitra ny diabe manerantany.
Izahay dia mitohy mifandray amin'ny olona sy ny andrim-panjakana manohana ny 2da. Up.
Hisy fizahana miaraka amin'ny horonantsary hanambarana ny diabe.
Ao Sao Paulo - SP: Fivoriana ho an'ny fanaparitahana ny 2da MM ary fananganana vondron'olona mpirotsaka an-tsitrapo handray anjara amin'ny fikarakarana sy fanaparitahana ny MM ao Sao Paulo.
Ny famokarana fitaovana hazavaina momba ny fomba hikarakarana ny mariky ny fandriampahalemana sy hetsika hafa ataon'izao tontolo izao amin'ny diabe any amin'ny sekoly sy oniversite.
Ao Cubatão - SP: Fihaonana miaraka amin'ny talen'ny fampianarana hampianatra ireo zanak'olombelona any amin'ireo sekoly ao amin'ny faritra.
Tamin'ny Jolay 22 dia nifankahita tamin'ny talen'ny 75 izahay mba hanatanterahana ny marika olombelona any amin'ireo sekoly samihafa any amin'ireo tanànan'ny morontsirak'i Santos.
Fanolorana ny diabe tamin'ny Jolay 23, ity fotoana ho an'ny talen-tsekoly sy mpandrindra sekoly amin'ny taona voalohany (1º mankany 5º degree).
Nisy angovo tsara tsara, amporisihantsika ireo sekoly hahatsapa ny mariky ny fandriampahalemana amin'ny fanombohan'ny volana martsa maneran-tany, mandritra ny herin'ny herisetra tsy hita ao amin'ny 2 ka hatramin'ny Oktobra 4.
Fandraisana anjara amin'ny 2ª Walk ho an'ny Kolontsaina fandriampahalemana izay hotanterahina ny volana aogositra
Any Caucaia - SP: Fanolorana ny 2º MM ho an'ireo solontenan'ny antokom-pivavahana samihafa ao an-tanàna.
Ny fandraisana anjara amin'ny 2ª Walk ho an'ny Kolontsaina fandriampahalemana, izay hotontosaina amin'ny volana Aogositra ny nataon'ny Minisiteran'ny Fanatanjahantena sy ny Kolontsaina Cotia amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vaomiera iraisan'ny rehetra.
Any Paraisópolis - MG: Amin'ny Aogositra 29 dia hihaona amin'ny sekoly Paraisópolis izahay mba hampahafantarana ny momba ny diabe manerantany ary hanolotra hetsika.
Mandritra ny alalàn'ny ekipa fototra, dia misy ny hetsika atao miaraka amin'ireo ankizy ao amin'ny efitrano Hafatra an'ny silo ao atsimon'i Minas Gerais.
Em Salvador - BA: Fitsangatsanganana any Bahia hanaparitahana ny volana martsa, hifandraisa amin'ny anadahy Bom Fim ao Salvador, Bahia, miaraka amin'ny tolo-kevitra hamorona vondron'olona tsy misy herisetra ao an-tanàna.
Ao amin'ny Recife - PE: Nihaona tamin'ny jolay 17 ny fihaonana tamin'ny Minisiteran'ny fampianarana Jaboatão dos Guararapes.
Ny 12 ny volana Aogositra dia hanatontosa ny fampiofanana ny tetikasa tsy misy herisetra any amin'ireo sekoly misy ny sekoly 30 ao amin'ny Faritra Metropolitan.
Any Curitiba - PR: Manomana fitsidihana amin'ny toby Lula Libre izahay.
Miezaka izahay manomana ny fitsidihana avy amin'ny Base Team mankany Lula mba hanaterana ny bokin'ny dian'i Amerika Atsimo ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana.
Atrikasa hisorohana sy handresena ny herisetra amin'ny mpampianatra sy ny reny any an-tsekoly any amin'ny distrikan'i Comas, Lima.
Fisorohana sy fandresena ny herisetra ataon'ireo mpampianatra any amin'ny distrikan'i Cañete.
Manana mpiambina any amin'ny tanàna tsirairay isika.
Isika dia eo amin'ny fandrindrana hampiroborobo ny hetsika amin'ny lafiny rehetra.
Manana toerana ivon-toerana ao Lima isika, nomen'ny Oniversite Ricardo Palma.
Ao amin'ny La Paz: Nifantoka tamin'ny fanaovana pirinty sy fanaterana taratasy fanasana ho an'ireo sekoly ambaratonga faharoa sy fototra any amin'ny faritr'i Sopocachi ao La Paz ireo hetsika.
Hatramin'ny volana Jolay dia nanomboka ny atrikasa ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra ao amin'io faritra io ihany.
Any Cochabamba: Hetsika izay notanterahina tany amin'ny Universidad Mayor de San Simón nandritra ny diabe Amerikanina Tatsimo tany 2018.
Ao Santa Cruz: Nanomboka tamin'ny fanaparitahana ireo hetsika ataon'izao tontolo izao ny Ivotoerana fampianarana Silo.
Fanombohana hetsika fanaparitahana amin'ny volana Jolay.
Manomboka ny fivoriana fandaminana izahay mba hiara-hivoatra amin'ny olona vaovao izay mirotsaka amin'ny hetsika.
Izahay dia mikasa ny fitsangatsanganana ny faritra rehetra any Chili mba hampiroborobo ny fivorian'ny vondron'olona ifotony.
Izy ireo dia hiankina amin'ny famokarana fitaovana isan-karazany mba handrakotra ny hetsika.
Ny hevitra dia ny fampifangaroana ny olona ahafahana manohy ny MM amin'ny edisyon manaraka.
Ary any Chili dia hanentana hatrany ny fanohanana ny TPAN (Fifanarahana varotra fiadiana nuklearika).
Ny fandrosoana dia efa natao miaraka amin'ireo parlemantera, ankehitriny isika hitarina any amin'ireo monisipaly.
Fifandraisana an-tsokosoko any Chile miaraka amin'ny tontolo meksikanina Alicia Bárcenas (ECLAC) izay miditra amin'ny Firenena Mikambana sy ny governemanta ao amin'ny faritra.
Ny mpikarakara WOMAD dia nanolotra hiara-hiasa amin'ny 2ªMM any Chili miaraka amin'ny fanatanterahana ny mariky ny fandriampahalemana.
Tao amin'ny Forum American American Humanistan'ny 11, 12 ary 13 tamin'ny volana Mey dia nanomboka ny MM for America ary resaka tao amin'ny Teatro del Puente.
Izahay dia hihazona ny varotra ny tamba-jotra amin'ny ekipa amerikan'ny MM ao amin'ity volana 27 ity.
Misy ny mpanao promotor any amin'ny faritany 8: Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rio Negro (El Bolsón), Bueno Aires (Tigre sy Mar del Plata) ary vao haingana tany CABA (Tanànan'ny Autoblika ao Bs. As.)
Hisy hetsika roa lehibe ao amin'ny firenena:
Fankatoavana ny Reny sy reniben'i Plaza de Mayo ho fanehoana ny tolona tsy misy herisetra
Ao Buenos Aires: Hetsika fanodinana any Parque Lezama, Faritanin'i Buenos Aires ary any CABA.
Ny ambiny dia hetsika fifandraisana sy ny fidirana fidirana.
Any Cordoba: Nisy ny ekipan'ny Promoter ao an-tanàna ary natao ny fivoriana fanomanana.
Ny 2MM dia efa nambara fa mahaliana ny fampianarana any amin'ny faritany Córdoba
Ny 2MM dia efa nambara fa mahaliana ny fampianarana any amin'ny faritany Córdoba.
Notolorana ny fangatahana adhesion eo amin'ireo andrim-panjakana hafa ao amin'ny Kaominina sy ny efitrano maha-mpanao lalàna.
Namboarana ilay izy:
Asa any am-pianarana
Ny tena fanatanterahana fampielezana an-tsokosoko
Ny fandinihana ny horonantsary "Ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary"
Fetibe ara-javakanto mozika an-tsehatra amin'ny hetsika hafa
Ao amin'ny Jujuy: Fihetsika kely no kasaina hatao amin'ny fandefasana ny bokin'ny March American South, mankany Efitrano fahagagana.
Tetikasa hanambarana ny herinandro 1 ny volana Oktobra ny herinandron'ny tsy fitiavana amin'ny 2019
Ao Salta: Ny vondrom-piarahamonina ho an'ny fampandrosoana ny olombelona miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny Direction Générale de l'Église de la Vondrononina ao amin'ny Kaominaly natolotra ny Vaomieran'ny Zon'olombelona sy ny Lalàmpanorenana momba ny Lalàm-panorenana momba ny tetik'asa hanambarana ny herinandro 1 Oktobra tamin'ny herinandron'ny herinandron'ny Nonviolence ny 2019 sy ny Plaza de la Paz y la Non Violencia dia notokanana.
Manao fandaharam-potoana miaraka amin'ny hetsika (1 isam-bolana) miparitaka:
Ny adihevitra momba ny sarimihetsika momba ny fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary
Marathon na bisikileta
Fifaranana miaraka amin'ny fetin'ny kolontsaina.
Ao Mendoza: Tamin'ny Jolay 19 dia nisy ny atrikasa atrikasa natao tamin'ny fikambanana sosialy nifanaraka tamin'ny 2MM.
Ao amin'ny 02 amin'ny Oktobra dia hisy ny Martsa manomboka eo Las Heras ka Centro de Mendoza.
Mariky ny fandriam-pahalemana mpianatry ny Sekoly Mendoza.
Ao amin'ny Punta de Vacas: Fankalazana ny fitsingerenan'ny taona 10º tamin'ny 1ªMM ao amin'ny 02 / 01 / 2020.
Manomana ny Martsa maneran-tany i Amerika
Na eo aza ny fahasarotana ara-toekarena, ara-tsosialy sy ara-politika, ny tsirairay avy araka ny fombany dia manandrana mandray anjara amin'ny tetikasa.
Raha izany no zava-misy, raha te hiara-hiasa ianao ary hanohana ireo hetsika ireo izay efa vita, dia afaka manao izany amin'ny fanamorana ny fifandraisan'ireo olona manokana, olona manokana na ONG any amin'ireo firenena voalaza etsy ambony na any amin'ny firenena hafa amin'ny alàlan'ity adiresy mailaka ity <info@theworldmarch.org>